Sanduuqa Aperitif - VIP Truffles
Bogga ugu weynSanduuqa Aperitif
Sanduuqa loo yaqaan 'aperitif box' oo ay kujiraan paante truffle iyo butterffle, badeecooyin gaar ah oo loogu talagalay aperitif xaflad
Sidee loo abaabulaa qalab gaar ah oo loogu talagalay gourmets? Hadiyad noocee ah oo la siiyaa saaxiib ama macmiil muhiim u ah shirkaddaada? Soo hel sanduuqa raaxada ee raaxada leh. Sanduuqa hadiyaddu wuxuu ka kooban yahay laba shey oo tayo sare leh oo maxalli ah: truffle pâté iyo butterffle.
Gawaarida gawaarida waa badeecad xafladeed, oo ku faani karta booska miisaska miisaska caanka ah. Diyaargarowga ku saleysan isku-dhafka ayaa sidaas darteed ah diyaargarowga ugu culus ee ugu culus.
Intaa waxaa dheer, iyaguna sidoo kale waa diyaargarow cunto karin oo dhadhan fiican leh, kaas oo sii deynaya qoraal jilicsan oo hazelnut iyo geedo hoosaad ah.
Baabuurta 'truffle pâté' iyo 'butterffle truffle'
Sanduuqa aperitif, laba shey ayaa si taxaddar leh loogu xushay khubaradayada qashin-qubka, si ay u helaan tayada dhadhankooda: subagga truffle.
Gawaarida 'truffle pâté' waa guurka xasaasiga ah ee wadan dhaqameedka iyo truffle. Aperitif aan la ilaawi karin, pulate truffle waxaa loogu raaxeysan karaa rootiga, rootiga dalka iwm.
Marka laga hadlayo subagga la kariyey, waxay si farxad leh ula yaabi doontaa burooyinka dhadhanka, oo ay ku jiraan kuwa ugu jilicsan. Xaqiiqdii, subaggu wuxuu dhadhamiyaa dhadhanka shuunka, maxaa yeelay shuftada leh qoraaladeeda isla waqtigaas khiyaanada iyo qalafsan waxay ubaahantahay inay lasocoto diyaargarow fudud.
Subagga shucaaca ee ka imanaya goboladayaga ayaa kaligiis lagu cuni karaa rooti rooti ama wax soo saar leh, sida dalka ham. Subagga truffle sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si kor loogu qaado saxan kulul. Sidee looma dhicin shaashadda kaliya lagu dhajiyay taabashada subagga qallalan?
Sanduuqa aperitif Baaskiil iyo subagga la kariyey waa fikrad hadiyadeed, taas oo aad hubto inaad ka farxin doonto qof jecel cunnooyinka Faransiiska ee xun. Xaqiiqdii, labadan shey ayaa ah suxuun aan caadi ahayn oo tayo sare leh.